Iindaba-Izizathu zengxolo yoMlawuli woXinzelelo lweRhasi
Umlawuli woxinzelelo kwinqanaba elinye
Isilawuli soxinzelelo lweDage ezimbini
Umlawuli woXinzelelo lweBrass
Umlawuli woXinzelelo lwezoNyango
Oonobumba kunye neeplagi
Amantongomane kunye neeFerrules
Iphaneli yegesi yesibini
Iphaneli yeGesi yeCylinder enye
Iphaneli yegesi ephindwe kabini
2A Umthombo weSolenoid iValve
2L umphunga Solenoid Valve
Khetha Vala Valve
Unkcenkceshelo Solenoid Valve
Izixhobo zegesi ezizodwa
Izizathu zengxolo yoMlawuli woXinzelelo lweRhasi
1.Ingxolo eveliswa kukungcangcazela koomatshini:Iinxalenye zegesi yokunciphisa uxinzelelo lwegesi iya kuvelisa ukungcangcazela komatshini xa kuhamba ulwelo. Ukungcangcazela koomatshini kungohlulwa ngokweendlela ezimbini:
1) Ukungcangcazela okuhamba rhoqo. Olu hlobo lokungcangcazela lubangelwa yijethi kunye nokukhutshwa kwendlela ephakathi. Isizathu kukuba ukuhamba kwesantya esiphuma kwivelufa kukhawuleza kakhulu, ulungelelwaniso lombhobho alunangqiqo, kwaye ukuqina kwamacandelo ahanjiswayo evalve akonelanga.
2) Ukungcangcazela kwamaxesha aphezulu. Olu hlobo lokungcangcazela luza kubangela ukuvakala kwelanga xa amaza endalo evalve engqinelana nesantya sokuhamba esibangelwa kukuhamba kwaphakathi. Iveliswa luxinzelelo lomoya olucutha ivalve ngaphakathi kwenqanaba elithile lokunciphisa uxinzelelo, kwaye nje ukuba iimeko zitshintshe kancinane, ingxolo iya kutshintsha. Kukhulu. Olu hlobo lwengxolo yokungcangcazela komatshini alunanto yakwenza nesantya sokuhamba kwaphakathi, kwaye ubukhulu becala lubangelwa kuyilo olungenangqondo yoxinzelelo lokunciphisa ivelufa ngokwayo.
2. Ebangelwa yingxolo yasemoyeni:Xa ulwelo olunokucinezeleka olufana nomphunga ludlula kwicandelo lokunciphisa uxinzelelo kwivalve yokunciphisa, ingxolo eveliswe ngamandla oomatshini alulwelo iguqulwa ibe sisandi samandla esibizwa ngokuba sisandi esisemoyeni. Le ngxolo yeyona ngxolo inengxaki ebangela uninzi lwengxolo yokunciphisa uxinzelelo lwevalve. Zimbini izizathu ezibangela le ngxolo. Enye ibangelwa kukungazinzi kwamanzi, kwaye enye ibangelwa ngamaza othusayo abangelwa lulwelo olufikelela kwisantya esikhulu. Ingxolo ye-aerodynamic ayinakupheliswa ngokupheleleyo, kuba uxinzelelo lokunciphisa i-valve lubangela ukuphazamiseka kolwelo xa ukunciphisa uxinzelelo kungenakuphepheka.
Ingxolo yentshukumo ye-Fluid: Ingxolo yentshukumo ye-Fluid iveliswa sisiphithiphithi kunye nokuhamba kwe-vortex emva kokuba ulwelo ludlula kwizibuko loxinzelelo loxinzelelo kwivalve yokunciphisa uxinzelelo.
Ixesha lokuposa: Mar-04-2021
Andiqinisekanga ukuba yeyiphi isisombululo okanye isisombululo segesi? Sebenzisa amava ethu ukukukhokela ...
Ukuqonda okunzulu ukuba yeyiphi isisombululo sevalvu okanye segesi ekulungeleyo nceda nceda usitsalele umnxeba okanye usithumelele i-imeyile ngoku ukuze sikonge ixesha kwaye siqinisekise ukuba unokwenza isigqibo esifanelekileyo kwinkampani yakho.